XOG XASAASI AH:Maxaadan Ogayn oo Villa Soomaaliya Caawa ka Socda iyo Wararkii u danbeeyey ee.. | jubbaland news
XOG XASAASI AH:Maxaadan Ogayn oo Villa Soomaaliya Caawa ka Socda iyo Wararkii u danbeeyey ee..
Warar caawa naga soo gaaray Madaxtooyada ayaa sheegaya iney baaqatay qorshihii uu Ra’isul wasaare Xasan Cali kheyre ku magacaabi lahaa golihiisa Wasiirada.
Koox Saxafiyiin ah, Xildhibaano iyo siyaasiyiin ayaa gaaray madaxtooyada Muqdisho iyo xafiiska Ra’isul wasaare Xasan Cali Kheyre si ay goob joog ugu noqdaan magacaabida xukumada cusub ee Soomaaliya, laakiin warar aynu helnay ayaa sheegaya in dib udhac saacado qaadanaya uu yimid.
Wararka ay Wakaaladda Warqaad.com heleyso ayaa sheegaya in beri galinka hore lagu dhawaaqi doono golaha wasiirada, waana kahor xiliga uu madaxweyne Farmaajo aadi doono dhanka magaaladda Nairobi, waxaana qorshaha uu yahay in madaxweynaha dalka uu ka tago iyadoo xukumadu dhisan tahay.
Laakiin Warar xasaasi ah ayaa kasoo baxaya liiska golaha wasiirada oo diyaarsan kuwaas oo ka koobnaan doona ilaa 25 wasiir oo sedex ama labo kamid ah ay noqon doonaan Ra’isul wasaare ku xigeen.
Warar aan ku kalsoon nahay dadka aan ka helnay ayaa sheegaya in wasiirka maaliyadda dowlada Soomaaliya loo magacaabi doono gudoomiyihii gudiga doorashada Cabdi Raxmaan Ducaale Bayle oo kasoo jeeda Beesha Samaroon (Somaliland).
Yuusuf Garaad Cumar oo kasoo jeeda Beesha Hawiye/Habar Gidir/Ceyr kana soo jeeda Galmudug ayaa noqon doono Wasiirka arimaha dibadda dowlada Soomaaliya
Arinta kale ee sida lama filaanka ah loogu arkay liiska golaha wasiirada ayaa ah in wasiirka arimaha gudaha loo magacaabayo Cabdi Faarax Juxa oo kasoo jeeda deegaanadda Puntland.
Wasiirka Gaashaandhiga dowlada ayaa la filayaa in loo magacaabi doono C/Xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi kaas oo kasoo jeeda Koofur Galbeed Soomaaliya isla markaana horey ula soo shaqeeyay madaxweynaha xiligii uu Ra’isul wasaaraha ahaa.
Wararka ayaa intaas ku daraya in nin magaciisa loo soo gaabiyay Ducaale oo kasoo jeeda Hiirshabeele lana maleynayo inuu yahay Abgaal uu noqon doono Ra’isul wasaare ku xigeen iyo xil awoodiisu tahay
Dhamaan liiska golaha wasiirada ayaa diyaarsanaa, waxaana jira warar sheegaya in baaqashada ku dhawaqidooda ay timid kadib dalab ka yimid madaxweyne Farmaajo kaas oo doonaya in maalinta uu dalka ka dhoofayo xili udhow la magacaabo wasiirada cusub.